Sababta oo ah dhowaan ku dhawaaqay U beddelashada istiraatiijiyaddeena deeqda, ma aqbalno weydiimaha hore ee bilowga ah ee barnaamijyadayada Degmooyinka & Bulshooyinka (R&C), Waxbarashada, ama barnaamijyada Wabiga Mississippi. Barnaamijka Wabiga ayaa qorax dhicidoona, iyo R&C iyo barnaamijyada Waxbarshada waxaa lagu badali doonaa barnaamij cusub oo jaaliyadeed oo diirada lagu saarayo dhisida Garsoor loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay. Barnaamijkaas bulshada wuxuu ku dhisi doonaa howlo dheer oo muhiim u ah hadafkeena cusub, halka loo furi doono meel fikir isku dhafan iyo habab cusub.
Waxaan rajeyneynaa inaan sii deyno tilmaamaha barnaamijka cusub ee Cimilada & Tamarta Midwest ee la ballaariyey (MC&E) iyo barnaamijka cusub ee bulshada dayrta 2020, waqtigaas oo ururro ku habboon tilmaamaha la adeegsan karo.
Fadlan la soco in barnaamijka MC&E uu adeegsado hanaan codsi xidhitaan.
The Farshaxanka barnaamijku wuxuu taageeraa farshaxanada shaqeeya si loo abuuro loona hormariyo bulshooyinka firfircoon ee gobolka Minnesota. Waxaan maalgelinaa hay'adaha, barnaamijyada, iyo mashaariicda nadiifiya adeegsiga farshaxanka ee kala duwan. Waxaan sidoo kale maalgelineynaa oo lafagureynaa wadashaqeyn maxalli ah iyo qaran, aqoon, iyo siyaasado ah oo sare u qaadaaya qiimaha sawirrada shaqadooda ee bulshadooda.
Ururada aan faa'iido doonka ahayn ee ku habboon xaq u yeelashada iyo shuruudaha xulashada waxay si toos ah u codsan karaan McKnight.
Shakhsiyaadka waxay dalban karaan deeqda iyadoo loo marayo Golaha Falaatinka Gobollada ama Fanka Fanka ee loo marayo iyada oo loo marayo mid ka mid ah barnaamijyadayada barnaamijka wehelnimada. Farshaxanlayaasha dhexe ee Minnesota ayaa dalban kara deeq ka timid lamaanaheena Forecast Public Art. Sanadkiiba hal guddi, guddi ayaa dooranaya hal fanaan si uu u helo Abaalmariye Farshaxan.
Sida loo dalbado deeqda Farshaxanka
Deeqaha Goboleedyada Goboleedyada
Magacaabi A Artist for McKnight Award leh Artist Award
Daryeelka Dhaqanka ee Bulshada
Sababta oo ah dhowaan ku dhawaaqay U beddelo istaraatiijiyaddeena deeqda, mar dambe ma aqbalno codsiyada deeqda cusub ee barnaamijkaan. Barnaamij cusub ayaa diiradda lagu saaray dhisida beelo loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa baddali doonta barnaamijkan. Mu'asasada ayaa sii deyn doonta tilmaamaha barnaamijka cusub deyrta 2020.
The International barnaamijku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo hoose.
Barnaamijka Cilmi Baarista Iskaashatada ee Wadajirka ah (CCRP) wuxuu u shaqeeyaa si loo hubiyo aduunka oo dhan oo heli kara cunto nafaqo leh oo si joogta ah u soo saara dadka maxalliga ah. Waxaan xoogga saari doonaa taageeradayada 12 dal ee Afrika iyo Koonfurta Ameerika.
CCRP waxay leedahay nidaam codsi oo xiran oo leh wicitaano isdaba joog ah oo loogu talagalay qoraallada fikradaha. Codsiyada maalgelinta waxaa laga aqbalaa oo kaliya ururada lagu martiqaaday inay codsadaan ama ka jawaabaan wicitaan la beegsaday.
Sidee u Dalbadaa Cilmi-baaris Cunto-wadaag ah
The Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest soo saaray yoolal cusub oo waa fidinta si loo hormariyo xalalka cimilada. Mu'asasada ayaa sii deyn doonta hagida cusub ee deeqda xiliga dayrta 2020. Ilaa waqtigaas, barnaamijka wuxuu sii wadayaa inuu deeqo bixiyo sida ku xusan tilmaamaha hadda jira. Fadlan la soco in barnaamijkani uu adeegsanayo hanaan codsi xidhitaan.
The Aasaasiyadeedka Minnesota waa lix aasaas oo goboleed oo madax banaan oo ka dhigaya Greater Minnesota. Codso deeq ama deyn ganacsi si toos ah iyada oo loo marayo saldhigga gobolka ee deegaankaaga.
Miisaaniyada aasaasiga ah ee MN
Iyada oo ay sabab u tahay istiraatiijiyaddeeda horumarineed ee samafal, hay'adda McKnight Foundation ayaa qorraxdeeda soo bixi doonta Barnaamijka Mississippi River, oo leh deeqaha kama dambaysta ah oo la bixiyay dhammaadka 2021. Taasi micnaheedu waa ma aqbali doonno wax weydiimo ama soo-jeedin cusub oo ku saabsan maalgelin. Ku dhawaad 30 sano, barnaamijka Mississippi River wuxuu ka shaqeeyay soo celinta tayada biyaha iyo adkeysiga webigaan weyn, oo ay ka mid tahay dib u soo celinta tamarta biyaha ee webiga iyo yareynta wasakhda beeraha ee afarta gobol. Waxaan ku faraxsanahay horumarka la taaban karo ee iskaashigani gaadhay.
Sanduuqa McKnight Fund for Neuroscience waa urur madaxbanaan oo madax banaan oo cilmi baaris ku sameeya cudurrada maskaxda iyo dabeecadda. Sanduuqa Taageerada Maaliyaddu waxay taageertaa cilmi-baaris cusub iyada oo loo marayo saddex abaal-marin oo sanadle ah oo loogu talagalay aqoonyahanka shakhsi ahaaneed ee Maraykanka.
Abaalmarinta Maqalka & Cognitive Disorder
Sababta oo ah dhowaan ku dhawaaqay U beddelo istiraatiijiyaddeena deeqbixinta, mar dambe aqbali mayno dalabyada deeqda cusub ee Gobolka & Bulshada. Barnaamij cusub ayaa diiradda lagu saaray dhisida beelo loo wada dhan yahay oo loo dhan yahay ee gobolka Minnesota ayaa baddali doonta barnaamijkan. Mu'asasada ayaa sii deyn doonta tilmaamaha barnaamijka cusub deyrta 2020.